Shaqaalaha Xarunta Qorista MHS | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
La kulan macallimiinta
Krista Hitchcock waxay la shaqeysay qorayaal da 'yar oo xilal kala duwan laga qabtay. Waxay shaqadeeda ka bilawday barashada luuqada ingiriiska ee iskuulada Edina, halkaas oo ay waliba ka mid ahayd jaaliyaddii ku jirtay Mashruuca Qoraalka Minnesota. Tan iyo waagaas, waxay u tababartay ardayda midba mid ka mid ah ACT iyo qorista tacliinta waxayna ku faraxsan tahay inay khibradahan u keento Xarunta Qorista Minnetonka. Waxay ka qaadatay shahaadada koowaad ee jaamacadda Gustavus Adolphus College iyo masters-ka ee maadada Ingiriisiga ee Jaamacadda St. Thomas.
Shannon Puechner waxay dhowr sano ee la soo dhaafay u ahaan jirtay tababare qoraa oo ka tirsan Xarunta Qoraalka ee Jaamacadda Minnesota. Xilkaas iyada ah waxay la shaqeysay ardayda leh luqado kala geddisan, iyadoo wax ku qoreysa dhammaan heerarka maadooyin badan oo kala duwan. Intaas waxaa sii dheer, waxay si wadajir ah u bartay aqoon isweydaarsi loogu talagalay tababarayaasha qorista cusub. Waxay ku qaadatay shahaadada koowaad ee shahaadada koowaad iyo liisanka waxbarashada Ingiriisiga ee Jaamacadda Bariga Illinois, Master-keeda ee Waxbarashada ee Hamline, waxayna hadda dhammeyneysaa Ph.D. barashada akhris-qoraalka ee Jaamacadda Minnesota.
Tababarayaasha Qorista Ardayda
Macallimiinta loo magacaabay macallimiinta fasallada 10-12 ayaa dhammaystay koorso semester-dheer ah oo qoraal iyo umeerin ah. Tababarayaasha ardaydu waxay ka shaqeeyaan Xarunta Qoraalka ka hor iyo ka dib dugsiga, iyagoo la shiraya ardayda isla markaana maareeya miiska hore. Waxay sidoo kale galaan fasallo ay ka shaqeeyaan qorista mashaariicda, lataliyaha ardayda dugsiga dhexe iyo ka caawinta dhacdooyinka kobcinta. Booqo Xarunta Qoraalka si aad u aragto astaamaha tababarayaashayada ardayda ee hadda jira!
Shaqaalaha Xarunta Wax Qorista iyo la-hawlgalayaasha ardayda waxay isu arkaan inay yihiin tababarayaal qoraal: waxaan siinnaa hagis shaqsiyeed iyo istiraatiijiyad loogu talagalay qorayaasha markay ka shaqeeyaan waraaqaha tacliinta, qoraalada kulliyadda, ama qorista shaqsiyeed.
Xarunta Qorista /